Maitiro ekugovana maforodha kubva kuICloud Drive muIOS 13 kana iPadOS | IPhone nhau
Maitiro ekugovana maforodha kubva kuICloud Drive pane iOS 13 kana iPadOS
Chirongwa Archives yaita kukwakuka kwakakosha muIOS 13. Icho chakanyanya kukosha chine chekuita nekukwanisa kubatanidza Makadhi eSd uye USB inotyaira madhiraivha Kuti tigovane ruzivo pakati pechigadzirwa chedu uye maitiro akaiswa pairi. Iko shanduko mukutarisa iyo iyo iPad yakaitwa nekutenda kuIOSOS ndiyo imwe yeshanduko hombe iyo iPad yakave nayo kubva pakatangwa iOS. Asi zvakare, iOS 13 inobvumidza shandisa maforodha akazara kubva kuICloud Drive uye neiyo Files app pachayo. Pane zvakawanda zvekugovana sarudzo dzatinoongorora mushure mekusvetuka.
Goverana maforodha nevanhu kubva kuICloud Drive uye iOS 13 kana iPadOS
Yakawanda yepamberi Files App. Vhura, gadzirisa uye gadzira zvinyorwa zvakachengetwa mune zvekurangarira zvekunze kana maseva kubva kuFiles app pachayo.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuvhura iyo app Archives kubva kune chero emidziyo yedu neIOS 13 kana neIpadOS. Dzvanya kumusoro kuruboshwe pane "Nzvimbo" uye sarudza iCloud Dhiraivha. With ichi tichapinda iCloud okuchengetera gore pacharo. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti isu tinogona chete kugovera maforodha akagadzirwa isu pachedu uye kwete maforodha akagadzirwa nemaapplication akaita seVLC, iyo yese Apple iWork suite kana PDFReader, mune yangu.
Kamwe mukati, tinodzvanya uye tinobata pane iyo icon yefaira iyo yatinoda kugovana uye mushure mekutsikirira masekondi mashoma isu tinosunungura kuvhura iyo nekukurumidza chiito menyu. Tichava nesarudzo yekuteedzera, kuteedzera, kufambisa, kudzima, kuwana ruzivo, kunyorera dhairekitori, kuritumidza zita, kumaka sevanoda, kumanikidza, kurigadzira pachiratidziri uye izvo zvinotifadza zvakanyanya: share.
Patinodzvanya kugovana menyu nyowani inovhura iyo kumusoro tinoona zita refaira (tinogona kusarudza akati wandei maforodha uye kuita zvakafanana maitiro yakambotsanangurwa). Pasi pazasi isu tine mukana wekugovana izvo zvakananga kuburikidza neAirDrop uye zvimwe zvinoshandiswa zvinoenderana nekuwedzera. Pazasi tinowana Wedzera Vanhu, rinonakidza basa. Patinodzvanya pazviri, tinogona kuteedzera chinongedzo chatinozotumira kune vanhu vatinoda kutumira iyo folda asi icho chinongedzo chichava nacho ropafadzo iyo nzira yapfuura yekugovana yakanga isina. Kana isu tikabaya panoti «Sarudzo dzekugovana» ​​imwe menyu inoratidzwa kwatinoona.
Ndiani anokwanisa kuwana: kana chete vanhu vatinokoka, kana chero munhu ane chinongedzo
Pamusoroi: vanhu ivavo vanogona kuchinja kana kungoverenga zvirimo mufaira
Isu tinongoteedzera izvo zvinongedzo zvakapihwa neiyo Files app uye nekuzvigovana nazvo neshamwari dzedu dzese. Iri basa rakafanana zvakafanana maererano nekushanda senzira yekugovana mafaera ese eGoogle Docs suite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugovana maforodha kubva kuICloud Drive pane iOS 13 kana iPadOS
Apple inoda kutenga 5G modem kupatsanurwa kubva kuIntel